Kuvuka amacala akudala esikhulu sikaMsipala weTheku | News24
Kuvuka amacala akudala esikhulu sikaMsipala weTheku
eThekwini - Lungase lubuyele enkantolo udaba lwesikhulu sikaMasipala weTheku uThembinkosi Ngcobo kulandela ukuvuswa kwamacala abethwese wona phambilini mayelana neNgqungquthela yokubuyisana eyabhuntsha.
Iphephandaba iLANGA LangeSonto libika ukuthi uNgcobo unikezwe incwadi emyalela ukuba avele phambi kwekomidi lokuqondiswa kwezigwegwe ngomhlaka 10 kuNovemba.
Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini uMasipala weTheku wamisa uNgcobo emsebenzini ngale ngqungquthela eyabhuntsha ngomzuzu wokugcina.
Kusolwa ukugxambukela kwepolitiki ngokubhuntsha kwale ngqungquthela njengoba kuholele ekutheni uNgcobo okunguyena ophethe uMnyango wezamaPaki, amaSiko, amaCiko nezokuNgcebeleka amiswe.
UNgcobo unikele enkantolo yezisebenzi nokho umasipala washaya ungqimphothwe, wahoxisa ukumiswa kwakhe emsebenzini.
OLUNYE UDABA: Ihlafuna ijeqeza iMeya yaseRichmond kulandela ukubulawa kweSekala layo
Ngkuthola kwabamaphephandaba, ngoLwesihlanu uNgcobo unikezwe le ncwadi yokuba avele phambi kwekomidi eliqondisa izigwegwe njengoba phakathi kwamanye amacala abekwe wona kubalwa nokumosheka noma ukungaphathwa ngendlela kwemali yabakhokhi bentela.
Ethintwa uNgcobo, ukuqinisekisile ukuthi uyitholile incwadi kodwa wabe enxusa ukuthi kuthintwe ummeli wakhe uReg Thomas.
Lo mmeli uveze ukuthi kuyamangaza okwenziwe wumkhandlu njengoba bese bezitshela ukuthi sebedlulile kulolu daba ngengoba beluyise enkantolo kwaba yiwona umkhandlu ohoxisa isinqumo sawo.
Ngesikhathi kuthintwa uMthunzi Gumede okhulumela iMeya kaMasipala, uveze ukuthi ubengakezwa ngalolu daba lokuvuswa kwamacala kaNgcobo.